चुनाव जित्ने, सरकारमा जाने र पैसा कमाउने नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति- नारायणकाजी — OnlineDabali
Posted on June 13, 2017 by अनलाइन डबली
नारायणकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ नेता, माओवादी केन्द्र
अहिलेसम्म निश्चय भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि बिस्तार गरौँ कि भन्ने धारणा राखेको छ । हाम्रो तर्फबाट भने कुनै समस्या छैन । पछि पूर्णता दिऊँ भनेका छौँ । दलहरुले पाउने मन्त्रालयको संख्या र कुनकुन मन्त्रालय भन्ने कुराको टुंगो अझै लागेको छैन । सायद एक/दुई दिनमा टुंगो लाग्नेछ र हामीले हाम्रो तर्फबाट जाने मन्त्रीहरुलाई छिट्टै टुंग्याउनेछौँ ।
पार्टीभित्र छलफल हुने कुरा सामान्य हो । अहिलेको बैठकमा अध्यक्षको प्रस्तावमै निर्णय भएको हो । को बन्ने/नबन्ने बारे त्यस्तो पक्ष/विपक्ष भोटिङ आदि केही भएको छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीभित्र मन्त्री को बन्ने भन्नेबारे विवाद छैन ।
टुंगिसकेको छैन । त्यो छिट्टै टुंगिन्छ ।
राप्रपा सरकारमा जाने निश्चित छ । अन्य साना पार्टी पनि सरकारमा जाने तयारीमा छन् । कतिपय मधेसवादी दलहरु निर्वाचनमा जाने कुरा पनि निश्चय हुन बाँकी रहेकाले उहाँहरु सरकारमा जानेबारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
चुनाव जित्ने, जसरी सरकारमा जाने र जसरी हुन्छ पैसा कमाउने प्रवृत्ति नै नेपालको राजनीतिको र त्यस्तै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति बन्ने खतरा देखिँदैछ । यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो भनेर मैले नेपालका राजनीतिकर्मी र हाम्रो पार्टीका कमरेड र जनतालाई ध्यान आकर्षण गर्न खोजेकै हुँ ।
तीनवटा निर्वाचन समयमा नै गर्ने यो सरकारको पहिलो कार्य हुनेछ । त्यस अन्तर्गत मिति तोकिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने र प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन निर्धारित समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने पहिलो कार्यभार रहेको छ ।
मधेसी मोर्चा भित्रको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमले निर्वाचनमा भाग लिने घोषणा गरिसकेको छ । र, उहाँहरु निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यस्तै राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउनको निम्ति र अनुकूल वातावरण बनाउन हामीले स्थानीय निर्वाचन ऐनमा पनि संशोधन गरिसकेका छौँ । यसरी वातावरण बनाइँदैछ ।
आशा छ, उहाँहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुनेछ । तर, उहाँहरुले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या पनि बृद्धि हुनै पर्ने भन्नुभएको छ । त्यो अहिले सम्भव देखिँदैन । त्यसरी उहाँहरु आउनुभएन भने पनि आम रुपमा मधेसी जनता निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् । मधेसी पार्टीहरुमध्ये पनि धेरै पार्टी सहभागी हुनेछन् ।
नेपाली राजनीतिक वातावरण जसरी हुन्छ, चुनाव जित्ने, जसरी सरकारमा जाने र जसरी हुन्छ पैसा कमाउने प्रवृत्ति नै नेपालको राजनीतिको र त्यस्तै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति बन्ने खतरा देखिँदैछ । यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो भनेर मैले नेपालका राजनीतिकर्मी र हाम्रो पार्टीका कमरेड र जनतालाई ध्यान आकर्षण गर्न खोजेकै हुँ । मेरो स्टाटसको सन्दर्भ पनि त्यही थियो । त्यसमा मैले अहिलेको सरकार गठन प्रक्रिया र हाम्रो पार्टीको बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन ।
पार्टीमा लगातार आफूले देखेको सही कुराको पक्षमा संघर्ष गर्नु मेरो दायित्व हो । हाम्रो संघर्षले त्यो रिजल्ट आइनसकेको अवस्था हुनसक्छ । तर, पनि हामीले पार्टीलाई सही दिशातर्फ लग्न लगातार प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ । यद्यपि यथास्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छैन । हामी निराश भएर पार्टी, समाज अगाडि बढ्दैन । सही कुराको पक्षमा लगातार लड्नु जरुरी छ । त्यसको उद्देश्य पार्टी बनाउने नै हो ।